Sabsibee Abbabaa - Wikipedia
Sabsibee Abbabaa artistii fi gaazexeessaa yoo ta'u hunda caala diraamaa dheeraa Abbaa Jaamboo jedhamuun uummata biratti beekkama.
Sabsibee Abbabaa dhalatee kan guddate Godina Arsii, Aanaa Hexosaa, Magaalaa Booruu Jaawwii jedhamtutti. Barumsasaa kutaa 1-8 achuma Booruu Jaawwiitti, kutaa 9-12tti ammoo Hurutatti barate. Barumsa sadarkaa olaanaa ammoo Yuunivarsiitii Finfinneetti meejerii Seenaa fi maayinerii Ogbarruu barate.
Sabsibeen bultii kan ijaarrate yoo ta'u abbaa ijoollee afuriiti.
Kitaaba dubbisuu yeroo kutaa 4ffaa baratu kan jalqabe Sabsibeen, mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti miinii miidiyaa keessatti hirmaataa ture. Yuunivarsiitii wayita baratus barreeffama adda addaa Afaan Oromoo fi Amaariffaan barreessaa ture.
Sabsibeen ogummaa aartii bukkeetti, gaazexeessa ta'ee waggaa dheeraaf Raadiyoo Faanaa keessatti tajaajilaa jira. Irra caalaa garuu artii akka jaalatu dubbata. Ogummaan kun lamaan tokko isa tokko akka deeggaran, keessattuu gaazexeessummaan aartii akka deeggare hima.
Sabsibeen, tapha Abbaa Jaamboo bara 1991 irraa eegalee raadiyoodhaan darbaa jiru barreessaa jira. Tapha kanaaf ka'umsa kan ta'eef nama Booruu Jaawwitti ollaasaa ture kan Abbaa Jamboo jedhamuu yoo ta'u namni kun dhugaatii wayii yoo fudhate waan hedduu nama dubbatu ture. Abbaan Jaamboo ilma Jaamboo jedhamu kan qabu yoo ta'u Jaamboon Sabsibee wajjiniin umuriidhan walitti dhiyaata.
Sabsibeen Abbaa Jaamboo barreessuu kan jalqabe Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa waggaa tokkoffaa wayita baratu ture. Yeroo barumsa sadarkaa lammaffaa barachaa turetti taphni Amaariffaa Abbiyyee Zargaawu kan 'Shangaay' jedhamu Raadiyoodhaan darbaa ture. Tapha bara 1989 darbaa ture kana baay'ee akka jaalatu kan dubbatu Sabsibeen, maaliifin afaan kiyya Afaan Oromootiin hinjalqabne jedhee yaadaa turuus dubbata. Kanuma ka'umsa godhachuun erga yuunivarsiitii seenee Afaan Oromootiin diraamaa dheeraa barreessuu jalqabe. Yeroo sanatti, diraamaa kanaaf qarsii 250 kanfalamaafii kan ture yoo ta'u qarshiin kun yeroo sanatti guddaa ture.
↑ Abbaa Jaamboo: Diraamaa raadiyoo waggoota 18f tamsa'aa jiru, dhiyootti kan baname: Onkoloolessa 21, 2017
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabsibee_Abbabaa&oldid=37129" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 12 Haggaya 2021, sa'aa 21:33 irratti.